Siciid Maxamed Daahir: Astaantii Dadnimada! – Wargeyska Saxafi
Siciid Maxamed Daahir: Astaantii Dadnimada!
Diyaar-garow waxbarasho ayaan ku jiray. Kulan aan qorshaysnayn ayaannu si kedis ah ugu kulanay mid ka mid ah dadka aan aqoonta iyo diinta ba ku ixtiraamo ee dalka. Annagoo wada hadlayna, ayuu alleenka gacanta ee aan sitay soo dhacay, anigoon eegin ayaan hoos u dhigay.
Mar kale ayuu soo dhacay, haddana eegay oo dhigay. Mar iyo marar ba markii aan iska indho-tiray, ayaan eegay, waa xaaskayga, Yasmiin Maxamed Kaahin, markaas ayaa dareenkaygu I waydiiyay waxa dhacay. “Shir baan ku jiraaye maxaa dhacay,” ayaan waydiiyay Yaasmiin intaan telefoonka ka qabtay. Markaas ayay igu tidhi, “Ma maqashay geerida?” Qiyaastii daqiiqad ku-dhawaad anigoon u jawaabin, ayaan ku celiyay, “Kumaa dhintay?” “Siciid Maxamed Daahir” ayay ii celisay. Astaamaha naxdinta weeye inaad garan ba waydo qofka laguu sheegayo magaciisa marka geeri sidan u xanuun badan aad maqasho. Waan garan waayay. Mar kale ayay iigu celisay. Markaas ayaa sidii naftaydu ay didday telefoonku iga dhici gaadhay. Uma socdo inaan sharraxo ilmada ay amar-la’aan indhahaygu qubeen, gacmaha iyo lugaha I gariiray iyo kursigii aan ku fadhiyay ee aan sida dangiigsiga leh aan uga buuxsaday sidii uu dhulku ila dhaqaaqay, waxaanse ku noqday xusuustii barashadayada isugu kaaya horraysay;
March 7, 2016 Wargeyska SaxafiAqoon, Astaan, Barasho, Barkhad Maxamed Kaariye, Dadnimo, Geeri, Siciid Maxamed Daahir, Wanaag
Previous Previous post: Xoghayihii Warfaafinta Xisbiga WADANI Oo Is Casilay Iyo Dareen-Celinta Guddoomiye Cirro
Next Next post: Maxamed Atam “Jihaadka Waan Aaminsanahay Sida Salaada Laakiin Maaha Sax Kan Al-Shabaab”